भिडियो ARSIV - RayHaber
30 अगस्त विजय दिवस अंकारा सबवे घोषणाको साथ मनाईयो
दिनभर अन्कारा सबवेमा खेल्दा नागरिकले ठूलो प्रशंसा पाए। आंकडा महानगरपालिका मेयर मन्सूर यावाको निर्देशनमा बक्स लुक अ Vict्कराको ढु stone्गा ”मार्च एक्सएनयूएमएक्स अगस्ट विजय दिवस समारोहको दायराभित्र मेट्रो स्टेशनहरूमा खेलाइयो। गानको रूपमा मेट्रो मेट्नुहोस् [अधिक ...]
30 अगस्त आत्मा Bursaray मा!
30 अगस्त विजय दिनको 97 हो। शोको वार्षिकोत्सवका कारण बुरसा महानगरपालिका द्वारा आयोजित, बुर्सारायका यात्रुहरूलाई सार्‍यो। सोशल मिडियामा साझेदारी गरिएको भिडियोमा, बुर्साराएका खेलाडीहरूले यात्रीहरूलाई 30 अगस्टको जीतको भावना र चेतनाको चित्रण गरे। Bursa महानगरपालिका नजिक आउँदै [अधिक ...]
इस्तानबुलको इतिहासमा यात्रा 'फेसन ट्राम'। इस्तानबुल एक शहर हो जहाँ यातायातका साधनहरू बस्तीमा दिन प्रतिदिन यसको बस्ती क्षेत्रका साथ परिवर्तन भएको छ जुन यसको इतिहासमा विस्तार भएको छ। सिंहासनबाट स्ट्रोलरहरू, ट्रामलीबाट ट्रालीबसेसहरू, कार, सबवे, बस र मिनी बसमा भित्री शहर यातायात। [अधिक ...]
आईएमएम कर्मचारी मिनीबसको जीवन बचायो
सार्नेरमा2माछा मार्ने काम गरेपछि, समुद्रीतर्फ उडान गरिएको एक मिनी बसमा लोग्नेमान्छेले लामो प्रयासका परिणामस्वरूप आईएमएम स्टाफलाई बचाए। ARKस्पार्क - MSTMARİN इस्तांबुल महानगरपालिका (आईएमएम) का सदस्य सदस्य नूर मुहम्मद याजाकी, केरेम कालेन्डर र सेफा एर्बिल, [अधिक ...]
अन्टल्या ट्राम टाइम्स, मार्ग र मूल्य तालिका 2019
2010 अन्टाल्याको मेट्रोपोलिटन नगरपालिका द्वारा अन्टाल्यामा सेवामा राखिएको थियो। एटाप लाइट रेल लाइन फातिह क्षेत्रबाट सुरु हुन्छ र म्यादान स्टेशन क्षेत्रमा समाप्त हुन्छ। 1 किलोमिटर को बारेमा रेखा। र त्यहाँ 11 यात्री स्टेशनहरू छन्। सबै स्टेशनहरूमा पैदल यात्री [अधिक ...]
टोल मार्ग र परियोजनाको लागत
13 / 08 / 2019 लेभेन ओजेन 0
इस्तानबुल-इज्मिर Motorway टोल मार्ग र परियोजना लागत: द बिन्दु टर्की सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना मध्ये बाहिर थियो। मारमारा र एजियन अब नजिक हुनेछ।9घण्टा र3र आधा घण्टा बीच इस्तानबुल-इज्मिर [अधिक ...]
बीबीका अध्यक्ष एकरेम इमामोलुले भोज अघि आफ्नो वाचा पूरा गरे, "म इस्तानबुलको सडकमा हुनेछु"। सुरुमा, ğmamoğlu काबाटाş - महमुतबे मेट्रो लाइन को Beşiktaş स्टेशन को निर्माण स्थल का दौरा किया। Besiktas [अधिक ...]
इस्तानबुल mirzmir मोटरवे परीक्षण प्रमाणित भयो! 3,55ले समय लिदैन
नयाँ राजमार्ग पत्रकार तैमूर अक्कर्टले इस्तानबुल र इज्मिर बीचको 3,5 घण्टाको परीक्षण गरे। Akkurt गरेको टर्की Yandex नक्सा आवेदन सबैभन्दा प्रयोग नेभिगेसन प्रणाली को एक परीक्षण सडक रूपमा साथै यसलाई गरिरहेको [अधिक ...]